मन्‍त्रालयका योजनामा नेकपा सांसदहरूको आक्रोश : यसरी नै बन्‍ने हो समृद्ध नेपाल?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
सांसदहरूले परिचालन गर्ने रकममा अनियमितता भएकाले खारेज गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला नेकपाका सांसदहरूले मन्त्रीहरूको विनियोजन शैलीका कारण उक्त रकम बढाउन आवश्यक भएको तर्क अगाडि सारेका हुन् । प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७७ २०:५२
कोसी अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट मिश्रको सरुवा
मोरङ — प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको उपचारमा सफल भएको कोसी अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. संगीता मिश्रलाई सरकारले काठमाडौंको परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालको निर्देशकमा सरुवा गरेको छ । उनको स्थानमा गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजका प्रमुख डा. चुमनलाल दासलाई ल्याइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार निर्णय गरेको सरुवा पत्र आफूले शुक्रबार प्राप्त गरेको डा. मिश्रले बताइन् ।
प्रदेश १ मा पहिलोपटक उदयपुरको भुल्केमा बैसाख ४ गते १२ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनीहरुलाई कोसी अस्पतालको कोभिड १९ उपचार केन्द्रमा राति १२ बजे ल्याइएको थियो । त्यसैबेलादेखि डा. मिश्रको नेतृत्वमा अस्पतालले संक्रमितको उपचार गरिरहेको छ ।
प्रदेशमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बेला सफल नेतृत्वकर्तालाई सरुवा गरेपछि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार प्रभावित हुने निश्चित भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।
‘कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको पिक आवरमा सरुवा भएकोले मात्रै अप्ठयारो महशुस भएको छ,’ डा. मिश्रले भनिन्, ‘परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल काठमाडौंको नेतृत्व गरेर काम गर्न पाउनु भनेको ठूलो अवसर हो ।’
प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७७ २०:३१